I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) Abafaki - i-Phcoker
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) ipowder (159752-10-0) ividiyo
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) i powder iyinkunkuma esebenza ngamandla, i-secretally-hormone secretagogue ngomlomo, ilinganisa intshukumo ye-GH yokuvuselela i-hormone ghrelin. Kuye kwaboniswa ukwandisa ukukhululwa, kwaye ivelise ukwanda okuqhubekayo kumanqanaba e-plasma amahomoni amaninzi kuquka ukukhula kwehomoni kunye ne-IGF-1, kodwa ngaphandle kokuchaphazela amazinga e-cortisol. Njengamanje uphantsi kophuhliso njengokuba unyango olunokunciphisa amanqanaba ala ma hormone, afana ne-hormone yokukhula engenabantwana okanye abantu abadala asebekhulile, kwaye uphando lwabantu luye lwalubonisa ukuba lwandise ubuninzi bomzimba kunye nesisitye samaminerali, okwenza kube ngonyango oluthembisayo unyango lobuthathaka kubantu abadala. I-MK-677 powder ibuye ishintshe umthamo we-fat fat and so-be nokuba nesicelo kunyango lokunyanya.
I-Raw ibutamoren Mesylate (MK677) ipowder (159752-10-0)uqobo
Igama lemveliso I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) ipowder
Igama leKhemikhali MK-677;2-Amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate;
uhlobo Numama Ibutamoren Mesylate (MK677)
Iqela leziyobisi MK677 powder
Inani leCAS 159752-10-0
I molecular Fi-ormula C27H36N4O5S.CH4O3S
I molecular WSibhozo 624.768 g / mol
IMasaisotopic Mass 624.229 g / mol
Indawo yokunyibilika 161 kwi315ºC
Bilisaba Point 868.9 ° c kwi-760 mmhg
I-Biological Half-Life iiyure 4-6
umbala mhlophe ukuba igugu
Sukufaneleka H2O: i-soluble5mg / mL, icacile
Sisibetho Tukushisa 2-8 ° C
Ibutamoren Mesylate Aukuguquka I-hormone yokukhulisa i-hormone; iguqula umthamo wesifo somzimba; ukwandisa kokubili ubuninzi besisu kunye nesisitye samaminerali; iguqula isantabolism yamanqatha omzimba
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) ipowder (159752-10-0) Inkcazelo
I-Ibutamoren mesylate (eyaziwa nangokuthi ibutamoren okanye i-MK677), ikhuthaza ukukhutshwa kwe-hormone yokukhula (GH) kwaye ikhulise ukukhula okufana nokukhula kwe-insulin 1 (IGF-1).
I-Ibutamoren mesylate yandisa amazinga e-hormone yokukhula ngokulinganisa intshukumo ye-hormone ghrelin kwaye ibopha enye ye-ghrelin receptors (GHSR) engqondweni. Usebenze i-GHSR ikhuthaza ukukhululwa kwe-hormone ukukhululwa ebuchosheni.
I-GHSR ifumaneka kwiingingqi zengqondo ezilawula ukutya, ukuzonwabisa, imizwa, izandi, imemori kunye nokuqonda. Ngoko ke, sinokulindela ukuba ibutamoren mesylate inokuchaphazela le mi sebenzi. Nangona kunjalo, kude kube ngoku, uphando lwekliniki luchaza kuphela imiphumo ye-ibutamoren mesylate inomdla - kwaye kulindeleke, njengeghrelin, ibutamoren mesylate iyanda.
Into enhle malunga ne-ibutamoren mesylate kukuba yandisa amazinga e-hormone yokukhula ngokunyuka okanye akukho kwanda kweminye ihomoni, njenge-cortisol. I-Cortisol igxotha i-immune system, iyanciphisa ukuphulukiswa kwesilonda, kwaye iphazamise ukufunda nokukhumbula, kwaye ngokuqhelekileyo akulungile ukuba le hormone iphakanyiswe.
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) ipowder (159752-10-0) Indlela yokusebenza
I-Ibutamoren mesylate (eyaziwa nangokuthi ibutamoren okanye i-MK-677), ikhuthaza ukukhutshwa kwe-hormone yokukhula (GH) kwaye ikhulise ukukhula okufana nokukhula kwe-insulin 1 (IGF-1).
Izinzuzo ze-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)
♦ I-MK677 Inokunceda nge-Bone Density
♦ I-MK677 Inokunceda Ukwandisa Ukukhula koMzimba
♦ I-MK677 Inokunceda Ukunciphisa ukuHluleka kweMisipha
♦ I-MK677 Inokunceda ngokulala
♦ I-MK 677 Inokunciphisa iziphumo zokuguga
♦ I-MK677 Inokuba neempembelelo zeNootropic kwiBrain
I-Raw Ibutamoren Mesylate (i-677-159752-10) iphakanyisiweyo I-Raw Ibutamoren Mesylate
Ngokusekelwe kuphando, i-20 eya kwi-30mg ibonakala iyona milinga ephezulu kakhulu. Kukho iingxelo zabantu abathatha ngaphezulu kwe-30mg ye-MK677 ngosuku, kodwa ayizange ivelise kwiziphumo ezingcono. Yintoni ebaluleke ngakumbi kunokuba umyinge ubude bomjikelo.
Kubaluleke kakhulu ukuba iMK677 imele ithathwe ixesha elide. Amanqanaba e-hormone yokukhula kufuneka akhiwe ngokuthe kancinci emzimbeni wakho, onokuthabatha ukuya kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba uqale ukuva iimiphumo.
Imiphumo emibi ye-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)
I-MK677 ayizange ivelise imiphumo emibi kakhulu yabasebenzisi bayo ukuba ixhalabele, kodwa abantu abathile banokuba nemiphumo ethile yokujonga. Abantu abathile abasengozini yokungena kwi-insulin okanye abanesifo sikashukela basengozini xa bethatha iMK677. Iimpawu ezihambelana nale miqathango zinokuthi zinyanzeliswe ngokusetyenziswa kweMK677. Ukubhekiselele kwisifundo esicacisiwe ngaphambili, abantu abadala asebekhulile imo engozini yokuphelelwa yintliziyo xa usebenzisa iMK677. Ngomnye umntu onempilo, kubonakala ngathi akukho miphumo echaphazelekayo efunyenweyo, kodwa uphando oluthe gqolo lufuneka rhoqo ukuqinisekisa abantu abathengi.